အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: June 2012
ထောင်ဖို့ လိုလို့ ထောင်တာပါ
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: APK - Cartoon: ထောင်တာ အကြောင်းရှိတယ် အော်ပီကျယ် ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၂ မှတ်ချက် - အော်ပီကျယ်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 5:40 AM
ဆရာ ကျော် ၀င်း ဆောင်းပါး
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Kyaw Win - Young Democracy and Strong Storm Ahead: ဒီမိုကရေစီက နုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန် (ဘေးမှရပ်ကြည့်မနေနိုင်တော့သည့်လူတစ်ယောက်၏ အထူးစိုးရိမ်သောက) ကျော်ဝင်း။ ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၂ အခါလည်လွန် ရင်တမ...
စာရေးဆရာ မြတ်ထန် ၏ တိုင်းပြည်က နုနု မုန်တိုင်းက ထန်ထန် နှင့် နာမည်ဆင်တူသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 1:48 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Ashin Wirathu - Burmese Losing on Home Ground
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Ashin Wirathu - Burmese Losing on Home Ground: အိမ်ကွင်းမှာ မရှုမလှ ရှုံးနိမ့်နေရသော ရွှေဗမာ အရှင်ဝီရသူ (မစိုးရိမ်)၊ မေ ၂၀၊ ၂၀၁၂ မေလ ၁၂ ရက်နေ့က ဖြစ်သည်ု။ စာရေးသူသည်...
Posted by Wai Lin Aung at 1:01 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Kyaw Win - Young Democracy and Strong Storm Ahead
မိမိ ဆနကို ဖော် ထုတ် နိုင်ပါတယ်
ဆန ကို ဖော်ထုတ် နိင်ပါတယ် သို့သော် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ကို လူံ့ဆော်
ဆော် ပီး တည်ငြိမ်မူ ပျက်ပြားအောင် ဆောင်ရွက်လို့  မရပါဘူး
သမရိုးကျ အမှားတစ်ခု မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အမှား နဲ့ ဖန်တီးထားသော လု
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်သော အခြေအနေ မျိုးဖြစ်လာလျှင်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အခြေခံ ဥပဒေ (၂၀၀၈)၊ အခန်း (၁၁)၊ အရေးပေါ် ကာလဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များ ပုဒ်မ ၄၁၀ တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်နယ် တစ်ခုတွင် ဖြစ်စေ...အရေးပေါ် အခြေအနေ တစ်ရပ် ကြေညာနိုင်သည်။
ပုဒ်မ ၄၁၃ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် လိုအပ်ပါက စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ကဲ စစ်တပ်အောက်မှာ ပြန်နေချင်ကြရင် ဆက်လုပ်ကြဗျာ။ အန်တီစုကလဲ ပြန်မလှည့်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အာမ ...မခံနိုင်ဘူးလို့ သတိပေးနေတာ အကြိမ်ကြိမ်။ ခင်ဗျားတို့ သားသမီးတွေ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အောက်မှာ ပြန်နေစေချင်ရင် ဆက်သာ လုပ်ကြ။ လူမျိုးရေး-ဘာသာရေး အဓိကရုန်
မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောစရာတောင် မလိုတဲ့ဟာကို။ ၂၀၀၇ မန္တလေးက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုန်း ကိစ္စ သိတဲ့သူတွေ သတိထားသင့်တယ်။ နှစ်ဘက်လုံး ထိန်းကြပါ။ မီးမလာလို့ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းတာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် အခုဟာက အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ ခံရနိုင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတယ်
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် ရ နိုင်လောက်သော အစီအမံ တို့ ဖြင့် ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ကို ဖန်တီး သည် ဟု ယူဆ စရာ ရှိနိုင်လောက်သောလည်း သက်သေ ထင်ရှားခြင်း မရှိသည့် အတွက် မည်သို့ ပြော ရမည်ကို မသိနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော အကြောင်းတရားတို့ အပေါ် ပြည်သူ့လူထု ၏ စဉ်းစားဥာဏ် ဆင်ခြင် နိုင်စွမ်း အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမူ မျှတစွာ ဆောင်ရွက်တတ် မူကို သွာ အားထားစရာရှိပေသည်။
တိုင်းပြည်မငြိမ်သက် လျှင် အာဏာသိမ်းမည် ဆိုလျှင်ကား
ှုနှစ်ဦး နှစ် ဘက် မည်သူမှ အကျိုးမရှိပဲ
မူလ အခြေအနေဆိုး ကို ပြန်ရောက်နိုင်ပေသည်]
တစ်ဘက်က ကိုင်ဆောင်ထားသည် က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတည်းဟူသော လက်နက် ။ တစ်ဘက်က ကိုင်စွဲထား သော အမျိုးသားရေး နှင့် ဘာသာရေး အားစော်ကား မတရား ပြုကျင်မူ့ ဆန့်ကျင်ရေး အုပ်ချူပ်ရေး အာဏာ ပိုင်တို့ ကိုင်စွဲ ထားသည်က မင်းမဲစရိုက်ပပျောက်ရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး မည်သူဘက် ကမှ လျှော့နိုင်မည်း နည်းလမ်း ကိုလည်းမမြင် သည့် အတွက် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် သည် အဖြစ်မျိုးမှ ကင်းဝေးရန်အလို့ငှာ ပြည်သူများ ဘာလုပ်သင့်သနည်း ။ ဖန်တီးထား သော အကြောင်းတရားပေလော သို့တည်း မဟုတ် မတော်တဆ ဖြစ်ခြင်းပေလော သို့ ကြောင့် ပင် ပြည်သူလူထု၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မြှော်မြင် မူ နှင့် အပြန်အလှန် ထိ်န်းကျောင်းခြင်းကို သာအားထားစရာ ရှိပေသည်။
Sent at 12:01 AM on Tuesday
စောင့်ကြည့်ရန်မှ တစ်ပါး တစ်ခြားမရှိနိုင် မိမိဝန်ကျင် မိမိတာဝန်ယူစောင့်ရှောက် ရင်း မတရားမူများ ထပ်မံ မပေါ်ပေါက်အောင် စောက်ရှောက် နိုင်ရန် အချင်းချင် စည်း ရုံးကြပါ။
လူမျိုးရေးလား ဘာသာရေးလား ရာဇ၀တ်မူလား ရောထွေး ဖြစ်ရပ်လား ဆင်ထားသော အကွက် လား သမရိုးကျ ဖြစ်ဆင် လား ခွဲ ခြား နားလည်ရန် ခက်ခဲလှ၏
ကဲ စစ်တပ်အောက်မှာ ပြန်နေချင်ကြရင် ဆက်လုပ်ကြဗျာ။ အန်တီစုကလဲ ပြန်မလှည့်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အာမ ...မခံနိုင်ဘူးလို့ သတိပေးနေတာ အကြိမ်ကြိမ်။ ခင်ဗျားတို့ သားသမီးတွေ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အောက်မှာ ပြန်နေစေချင်ရင် ဆက်သာ လုပ်ကြ။ လူမျိုးရေး-ဘာသာရေး အဓိကရုန်းဆိုတာ ကောင်းတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောစရာတောင် မလိုတဲ့ဟာကို။ ၂၀၀၇ မန္တလေးက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုန်း ကိစ္စ သိတဲ့သူတွေ သတိထားသင့်တယ်။ နှစ်ဘက်လုံး ထိန်းကြပါ။ မီးမလာလို့ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းတာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် အခုဟာက အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ ခံရနိုင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။
Sent at 12:41 AM on Tuesday
မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောစရာတောင် မလိုတဲ့ဟာကို။ ၂၀၀၇ မန္တလေးက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုန်း ကိစ္စ သိတဲ့သူတွေ သတိထားသင့်တယ်။ နှစ်ဘက်လုံး ထိန်းကြပါ။ မီးမလာလို့ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းတာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် အခုဟာက အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ ခံရနိုင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။
Posted by Wai Lin Aung at 2:04 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Ashin Wirat...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Kyaw Win - ...
I feel like havingaballl.
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Dr Myan Aun...
ဒီမိုဝေယံ: တောကြီးမျက်မည်းအတွင်းမှ လျှပ်စစ်မီးတွေ ...